INKAMPANI - AOOD Technology Limited
Singumkhiqizi nomphakeli osuselwe kubuchwepheshe obususelwe kubuchwepheshe.
I-AOOD TECHNOLOGY LIMITED yasungulwa ngonyaka ka-2000 ukuklama nokwakha amasongo ashelelayo. Ngokungafani nezinye izinkampani eziningi zokukhiqiza nokucubungula, i-AOOD ingumkhiqizi nomphakeli osuselwe kubuchwepheshe futhi osungula izinto ezintsha, sihlale sigxile ku-R & D yezisombululo ezisezingeni eliphakeme kakhulu ezingama-360 ° ezijikelezayo zezicelo zezimboni, ezokwelapha, ezokuvikela nezasolwandle.
Imboni yethu itholakala eShenzhen yaseChina okuyindawo ebaluleke kakhulu yobuchwepheshe be-R & D kanye nesisekelo sokwenza eChina. Sisebenzisa ngokugcwele ukuthengiswa kokuthengiswa kwezimboni kwasendaweni nezinto zokwakha ezingabizi kakhulu ukuletha amakhasimende ukusebenza kwezindilinga ezisebenza ngogesi eziphezulu. Sesivele silethe imihlangano yamaslip engaphezulu kuka-10000 kumakhasimende futhi ngaphezu kwama-70% abekiselwe okwenzelwe izidingo ezikhethekile zamakhasimende. Onjiniyela bethu, abasebenzi bokukhiqiza nabasebenza emhlanganweni bazibophezele ekuhlinzekeni amasongo ashelelayo ngokuthembeka okungenakuqhathaniswa, ukunemba nokusebenza.
Slip Ring Imihlangano
Sizibona singumlingani wesiliphu osekela amakhasimende ngenkuthalo ekwakhiweni, ekuthuthukisweni okuqhubekayo nasekukhiqizweni kwemikhiqizo. Phakathi neminyaka edlule, sinikela ngomugqa ophelele wamasongo ajwayelekile futhi wangokwezifiso okushelela ngaphezu kokuhlinzeka ngezinsizakalo zobunjiniyela eziphelele ezihlanganisa ukuklama, ukulingisa, ukukhiqiza, ukuhlangana nokuhlolwa. Abalingani be-AOOD bahlanganisa izicelo ezahlukahlukene zomhlaba wonke ezibandakanya izimoto ezihlomile, izisekelo ze-antenna ezihleliwe noma ezihambayo, ama-ROV, izimoto zokulwa nomlilo, amandla omoya, i-automation yefektri, amarobhothi wokuhlanza indlu, i-CCTV, ukuvula amatafula nokunye. I-AOOD iyaziqhenya ngokunikela ngezinsizakalo ezivelele zamakhasimende nezixazululo eziyingqayizivele zomhlangano wesilayidi.
Ifektri yethu ihlomisa ngemishini esezingeni eliphakeme yokukhiqiza kanye neyokuhlola kufaka phakathi umshini wokubumba umjovo, umshini wokugaya, umshini wokugaya, isivivinyo esihlanganisiwe sesiliphu, i-generator yesiginali ephezulu, i-oscilloscope, umhloli ohlangene we-encoder, imitha ye-torque, uhlelo lokuhlola ukumelana namandla, isivivinyo sokumelana nokuqina, i-dielectric umhloli wamandla, i-signal analyzer nohlelo lokuhlola impilo. Ngokwengeziwe, sinezindawo ezahlukahlukene ze-CNC machining kanye nomhlangano wokukhiqiza ohlanzekile ukukhiqiza imfuneko ekhethekile noma amayunithi wezindandatho asezingeni elijwayelekile.
I-AOOD ihlale igxila ekwakheni isixazululo esisha sokuxhumana esisheshayo nokuhlangabezana nezidingo ezandayo zezicelo ezintsha. Noma imuphi umbuzo owenziwe ngezifiso wamukelekile.